अध्याय 3342 कानून उपन्यास नि: शुल्क अनलाइन मा अद्भुत छोरा को - XperimentalHamid
जुलाई 24, 2021 जुलाई 23, 2021 by कासिम खान
पढ्नुहोस् अध्याय 3342 उपन्यासको कानून मा अद्भुत छोरा by भगवान पात नि: शुल्क अनलाइन।
25,144 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्
विगतमा हामिद अझै उनीबाट उम्कने डरले डराए, तर लडाईदेखि उनी यस बारे चिन्तित भएनन्।
किनभने यदि Zynn वास्तवमै भाग्न हिम्मत, त्यो पनि छाया बाहिर लुटेको स्निपरको एक गोली द्वारा lled K प्राप्त अघि, केहि किलोमिटर बाहिर भाग्न सक्छ।
आखिर, अनुहार हराए पछि, क्याटाक्लिस्मिक फ्रन्टले लामो समयदेखि कठोर शब्द दिएको छ।
हामिदको आधारबाट झींगा पनि बाँच्न सक्दैन, त्यसैले जीनलाई हिम्मत दिनुहोस्, ऊ पनि भाग्ने हिम्मत गर्दैन।
जीनलाई पठाइयो, मार्भेन त्यसपछि हामिदसँगै हामिदको अफिसमा आए।
यो कार्यालय भन्न को लागी, वास्तवमा, खाडल मात्र एक ठूलो क्षेत्र छ।
खाडल मार्फत, त्यहाँ एक दर्जन वर्ग फुट भित्र भित्र भित्री ठाउँ छ। बिजुली बत्तीको साथ भित्र, भित्रबाट इन्टरनेटमा प्रवेशद्वारबाट भाँडाकुँडा पाइप छ, लगातार भित्री भागमा हवा पठाउँदै।
भित्र पसेपछि हामिदले मार्भेनलाई परिचय दिए: “अब हामी पूर्ण रूपमा लुकेका किलाहरू र खाडलहरूको पूर्ण उत्खनन गर्दैछौं, छोटो समयमा यी खड्डाहरू आपसमा जोड्न सकिन्छ।”
“हामी पूर्ण प्रवेश हासिल गर्न सक्दैनौं भने पनि, कम्तिमा पहिलो भेन्टिलेसन, पानी आपूर्ति, र खोल्नको लागि विद्युत आपूर्ति। तब आन्तरिक वातावरण सुधार गर्न जारी राख्नुहोस्, र खाडललाई अधिक बाँच्न योग्य बनाउन कोसिस गर्नुहोस्! "
मार्भेनले बिस्तारै हिलायो र भन्यो, "मैले तपाईको उपत्यकाका भवनहरू मूल रूपमा सपाट भएको देखेको छु, यस्तो ठूलो ठाउँको लागि तपाईको योजना छ?"
"त्यसोभए योजना के हुन सक्छ?" हामिदले भनेका थिए: "एकपटक अर्को पक्षले गोली हानेपछि यो तोपखानाले बेंसीको भित्रबाट पहिलो पटक हिर्कायो।"
"उपत्यकाको मुख ठूलो र तल मुनि सानो छ, यो तोपखानाको लागि उत्तम लक्ष्य हुने थियो, त्यसैले त्यहाँ व्यावहारिक प्रयोग थोरै छ।"
मार्भेनले भने: "मेरो सुझाव छ कि तपाईं ती सबै घरहरू ध्वस्त पार्नुहोस्, निर्माण फोहोर फाल्नुहोस् र पानीको भण्डारको लागि पानीको भण्डारको लागि पाँच वा छ मिटर गहिरो आयताकार खाडाहरू खन्नुहोस् र पानीको मौसमको फाइदा लिनुहोस्।"
"यी जलाशयहरु संग ताजा पानी को एक ठूलो मात्रा भण्डारण गर्न, र त्यसपछि शीर्ष मा एक कभर थप्न को लागी एक तरीका खोज्न। वाष्पीकरण घटाउनुहोस्, ताकि सुख्खा मौसम लामो समयको लागि घेरा हाले तापनि पानीको अभावबारे चिन्ता लिनु आवश्यक पर्दैन। ”
मध्य पूर्व तुलनात्मक रूपमा सुक्खा र तातो छ, र सिरिया मा वर्षा thatतु लामो छैन। एकपटक बरसात पछि, ताजा पानीका स्रोतहरू, धेरै दुर्लभ नभए पनि अपेक्षाकृत मूल्यवान छ।
मारभेन अब हामिदलाई उनका विपक्षीहरूले भाँडाबाट बाहिर निकाल्ने चिन्तामा पर्दैनन्, बरु उनलाई चिन्ता छ कि उनका विपक्षीहरूले उनीमाथि पूर्ण घेरा हालिदिनेछन्। लडाई नगरी लामो घेरा बनाउनुहोस्।
वास्तवमा, मार्भेनका लागि, उनले हामिदलाई समाधान गर्ने सोच्न सब भन्दा सजिलो तरिका भनेको समुद्र र भूमि दुवैतर्फ बाहिरी संसारसँगको उसको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा काट्न सेनाहरू परिचालन गर्नु थियो।
विशेष गरी, आपूर्तिको प्रवेशका सबै साधनहरू काट्नु आवश्यक थियो, ताकि हामिदले बाहिरी विश्वबाट कुनै आपूर्ति प्राप्त गर्न सकेनन्।
यस प्रकार, हामिदले थकित नभएसम्म आफ्नै भण्डार खपत गर्नुपर्नेछ।
खाना र गोला बारुद तुलनात्मक रूपमा राम्रो संरक्षण हो, मध्य पूर्व जस्तो स्थानमा, सुख्खा र प्रकाश वातावरण पाउन, दुई वा तीन बर्षमा स्थिर भण्डारण ठूलो समस्या होइन।
तर ताजा पानीका स्रोतहरूको ठूलो मात्रा मात्र सुरक्षित गर्न राम्रो छैन।
बोतलको पानीले पिउने पानी राख्नु कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बाँच्नको लागि पानीको ग्यारेन्टी दिन गाह्रो छ।
भूगर्भीय स्रोतहरू प्रशस्त छैनन्, अर्को सुख्खा मौसममा केही महिनासम्म पानी पर्न सक्छ, भूगर्भीय पानी पनि ठूलो मात्रामा प्रभावित हुनेछ।
त्यो अवस्थामा, आधारमा सामान्य पानी सुनिश्चित गर्न, तपाईंले यसलाई बाहिरबाट सार्नु पर्छ।
तर एक पटक शत्रुले ट्राफिक काटिदियो। ताजा पानीका स्रोतहरू प्रभावकारी रूपमा पुनःभरण गर्न सकिदैन, हजारौं मानिस एकपटक पानीको अभावको सामना गर्छन्, मनोबल निश्चित रूपले पतन नभएसम्म निरन्तर घट्नेछ।
त्यसकारण, मार्भेनले हमीदलाई प्रस्ताव गरे, पहिले केही पानी भण्डारण परियोजनाहरू गर्ने तरिका भेट्टाउन सक्छन्।
हामिदले अझसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैनन भनेर मार्भेनले भने: “जे भए पनि तपाईको आधार बमबाट बाहिर निस्किएको छ र शत्रुको गोलाबारी आगो एकदमै गह्रौं छ, तपाईले यो आधार पुन: सक्रिय गर्न सक्नुहुन्न। पानी भण्डार गर्न र भविष्यको लागि थप पहिलो-तयारी तयारी गर्न खाडल खन्नुहोस्। ”
"यसबाहेक, गहिरो उत्खनन गर्ने भण्डार तपाईं गोलाबारीबाट डराउनु हुँदैन, पानी माटोमा परिणत भए पनि, जबसम्म यो व्यवस्थित र फिल्टर हुन्छ, र त्यसपछि मात्र बाँझ रहन्छ, यसलाई अझै दैनिक प्रयोगको लागि राख्न सकिन्छ।"
जब हामिदले यो सुने, उनले अनुमोदनका साथ भने, “भाइ, यो एक राम्रो विचार हो। भोलि यो काम सुरु गर्न म दुई सय जनाको व्यवस्था गर्नेछु! "
मार्भनले होड गर्यो, केहि कुरा सम्झेर उनले हामिदलाई सोधे, "ठीक छ, वृद्ध भाई, मैले सुने कि क्याटाक्लाइस्मिक फ्रन्टले सरकारी सेनालाई सहयोग गरेको कारण यो थियो कि तपाईलाई सफा गरे पछि उनीहरुलाई सिरियामा भाडामा घर बनाउन को लागी स्वीकृति दिइनेछ, मलाई अचम्म लाग्छ कि त्यो सत्य हो कि? "
हामिद चकित भए र सोधे, "भाई, मैले भर्खरै यो खबर सुनेको थिएँ, तिमीले कहाँ सिक्यौ?"
Law विचार "कानून उपन्यास नि: शुल्क अनलाइनमा आश्चर्यजनक छोराको अध्याय २2" मा
जुलाई 23, 2021 मा 7: 29 पीएम
राम्रो अपडेट, ऊ कसरी छोड्नेछ?
लासिसी केहिन्दे नुरुडिन
जुलाई 23, 2021 मा 6: 15 पीएम
मलाई अध्याय २3343 चाहिन्छ